Kulan looga hadlayay Amniga oo lagu qabtay Muqdisho+Sawirro – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Kulan looga hadlayay Amniga oo lagu qabtay Muqdisho+Sawirro
Kulan looga hadlayay Amniga oo lagu qabtay Muqdisho+Sawirro
Kulan looga hadlayay Amniga Caasimada ayaa xalay lagu qabtay Magaalada Muqdisho.
Kulanka ayaa waxaa shir guddoominayay Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan (Eng Yarisoow), waxaana ka qeyb galay Taliyeyaasha Ciidamada sida Taliyaha Ciidanka Xoogga Sareeyo gaas Daahir Aadan Cilmi (Indha qorshe) Taliyaha Ciidanka Booliska Bashiir Cabdi Maxamed, Taliyaha Ciidanka Asluubta Bashiir Goobe, Guddoomiye ku-xigeenka Amniga iyo Siyaasadda Gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Tuulax iyo Mas’uuliyiin kale oo katirsan Dowladda.
Dhinaca kale Kulanka ayaa intiisa badan waxaa diirada lagu saaray sidii sare loogu qaadi lahaa Howlgalada Amniga lagu sugayo ee Ciidamada Amniga ay kawadaan Degmooyinka Gobolka Banaadir.
Inta uu kulanka uu socday ayaa sidoo kale waxa lagu soo hadal qaaday shaqsi la sheegay inuu ka dambeeyay dilka Haweeney lagu magacaabi jiray Suleeqo Yuusuf Axmed, taas oo meydkeeda laga helay Hotel Caamir oo ku yaalla Isgooyska Baar ubax ee Degmada Howlwadaag ee Gobolka Banaadir.
Previous articleMaxaad ka ogtahay App-ka marka sawirrada gabdhaha la dhex galiyo dharka ka siibaya?
Next articleDEG DEG:-Qarax Goor Dhow Ka Dhacay Magaalada Muqdisho
IIraan oo sheegtay in ay heshay xog ku saabsan dilkii Qaasim...